Mayelana ne-Hielscher Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Hielscher Ultrasonics ibhizinisi lomndeni, eliseTeltow eduze kwaseBerlin (eJalimane). Ukugcizelelwa okuyinhloko kwemisebenzi yayo yikhiqizo, ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwamadivaysi e-ultrasonic ukuze kusetshenziswe kuyo I-Laboratory futhi ngokuphindaphindiwe Izimboni izicelo. Izinqubo zezobuchwepheshe kanye nokuqalwa kwezinqubo ezintsha ezisekelwe nge-ultrasound zaqinisekisa ukukhula kwenkampani kanye nokwamukelwa kwemakethe. Namuhla, amadivaysi e-ultrasonic eyenziwe yi-Hielscher Ultrasonics asetshenziselwa ama-laboratories kanye nezitshalo zokukhiqiza kuwo wonke amazwekazi emhlabeni jikelele. Hielscher Ultrasonics ihlanganisa amadivaysi ultrasonic zibe izinhlelo ezinzima ultrasonic, ezifana ucingo lokuhlanza izinhlelo, futhi. Lezi zinhlelo zikhiqizwa ukuze zihlangabezane nezimfuneko zamakhasimende ngokwemandla, ububanzi obuningi bezesekeli kanye nemishini yokuqinisekisa isimo.
Hielscher Ultrasonics uzibophezele ekuhlinzekeni izindlela ezintsha zokucubungula ultrasonic ezivumela amakhasimende ethu kanye nabalingani bethu – abaholi ensimini yabo – ukuletha imikhiqizo namasevisi amasha noma amasha kakhulu.
I-Hielscher Ultrasonics ibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni, ekwenziweni nasekuhanjisweni kwe-homogenizer ephezulu ye-ultrasonic esebenza kahle.
I-Hielscher Ultrasonics - Isethulo Senkampani
I-Hielscher USA, Inc. ungummeleli we-Hielscher imishini ye-ultrasonic emakethe yaseNyakatho Melika. Ukuphatha nokubalwa kwezimali ku-Wanaque, NJ 07465, eU.SA. Ukucubungulwa kwe-oda nokugcina impahla ku-Mount Holly, NJ 08060, eU.SA
I-Hielscher Ultrasonics ingumhlinzeki weNdunankulu womhlaba wokusebenza okuphezulu, amadivayisi aphezulu aphezulu we-ultrasonic. I-Hielscher Ultrasonics ifuna ukuthuthukisa njalo imikhiqizo nemisebenzi yayo. Ngenxa yalesi sizathu, i-Hielscher Ultrasonics isungule a Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ngokuhambisana I-ISO 9001: 2015. Isiqinisekiso se-ISO 9001: 2015 sanikezwe ngu I-BSI Group, ngokususelwa ekuhloleni okuphelele kwezinhlelo eziqalisiwe ngaphakathi kwalezi zingxenye zokuphatha, ukuqinisekisa ukuthi ikhono lokugcina nokuqhubeka ngcono lezi zinhlelo.
Isimiso se-ISO 9001: 2015 sichaza izidingo zesistimu yokuphathwa kwekhwalithi futhi kubhekwa njengenye yezindinganiso ezamukelwe kakhulu emhlabeni jikelele. Izinhlangano eziningi zezwe nezamazwe ngamazwe zilwela ukuhambisana nale nqubo. Le nqubo yenza inhlangano ikwandise ukuphumelela kwayo ekufezeni ukuncintisana okuthuthukisiwe, njengoba izinga ligxila ekwaneliseni kwamakhasimende. I-standard ye-ISO 9001: 2015 ibheka abasebenzi’ ukubandakanyeka njengenye yezinto ezibalulekile ekuphumeleleni ukuze kugcinwe uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi futhi kuqinisekiswe ukuthuthukiswa okuqhubekayo.
Ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwenkampani kanye noHlelo Lokuphathwa Kwamakhono kutholakala ngokubeka imigomo nezinhloso ngokusekelwe ezinkomba zokusebenza, ukuhlolwa kwamabhuku, izidingo zokuqeqesha kanye nempendulo yamakhasimende. Imihlangano iqhutshwa njalo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuqhubekayo kweSimiso sokuPhathwa kweMigomo, ukubeka imigomo nezinhloso nokuhlola noma yikuphi ukulungisa noma ukuvimbela izinyathelo ezisebenzayo.
Landa isitifiketi sika-Hielscher sika-Registration for System Management System DIN EN ISO 9001: 2015 lapha: I-ISO Cert-Hielscher Ultrasonisc-eng-2019-2022
Inqubomgomo yekhwalithi ye-Hielscher
I-Hielscher Ultrasonics, ikhwalithi engcono yomkhiqizo, ukuvikelwa kwemvelo, izindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphepha nokuzuza okungcono kokunciphisa kubaluleke kakhulu uma kuqaphela imigomo yenkampani. I-Hielscher Ultrasonics iyaqaphela ukuthi ikhwalithi yinto ebaluleke kakhulu yebhizinisi engakwazi ukuyekethiswa. Abaphathi benkampani bazibophezele ekugqugquzeleni ukuqwashisa nokuqonda kweSikimu soMgangatho, futhi baqinisekise ukuthi ukukhulumisana okuphelele kubonakala kulo lonke ibhizinisi.
Sizama ukuqhubeka sithuthukisa izinqubo zethu zebhizinisi, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ukuze sihlangabezane ngokugcwele nokulindelwe kwamakhasimende ethu. Sibheka ikhwalithi njengomthwalo wemfanelo wabelwe bonke abasebenzi bethu. I-Hielscher Ultrasonics izama ukuba umlingani wokuzikhethela kumakhasimende ayo ekusesheni kwabo izixazululo ezintsha nezokuncintisana ze-ultrasonication.
Ukusimama nokuqwashiswa kwemvelo
I-Hielscher Ultrasonics GmbH isebenza kuzo zonke izindawo zebhizinisi eziphezulu ukusimama kanye nomthwalo wemvelo. Ngakho-ke, sithola izimpahla namasevisi ngokuyinhloko kusuka abahlinzeki besifunda ukugwema imigwaqo eminingi yokuhamba. Ekukhiqizeni, sinake izindlela zamandla nezindlela eziphansi. Esikhungweni sethu sokukhiqiza kahle sishisa futhi siphumelele izakhiwo zethu zemvelo, sisebenzisa ukushisa kwe-geothermal pump. Ukushisa okwedlulele ekukhiqizeni kanye nokuhlolwa kokugijima kutholakala futhi kuqondiswe ekupompheni kokushisa ukushisa. Lokhu kunciphisa ukusetshenziswa kwethu kwamandla okuqala kakhulu. Ekukhulumisaneni nekhasimende, sigwema iphepha lapho kunokwenzeka khona.
Kusukela ngo-2007, lewebhusayithi (www.hielscher.com) kanye namabhokisi ethu e-imeyli asebenze ngogesi Imithombo yamandla evuselelwe engu-100% efana nemimoya, i-hydro kanye namandla alanga kumhlinzeki waseJalimane 1&1. Ngokweqiniso lokuthi thina wabelane ngomthamo wekhompyutha we-host host nezinye izingosi ezithathiwe, sinciphisa ukusetshenziswa kwamandla okuqhubekayo. 1&I-1 isebenzisa amandla nemithombo yamandla amakhulu kakhulu iminyaka.
Ngokusetshenziswa amadivaysi ultrasonic asebenza kahle kakhulu asetshenziswa yiHielscher ekukhiqizeni kwakho, isb ukuxuba, ukuhlakazeka noma ukuhlelwa kwe-homogenizing, unganciphisa ukusetshenziswa kwakho kwamandla uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe bokuxuba obuvamile kanye namanye amadivaysi e-ultrasonic, futhi.
Ihloko yakwaHielscher Ultrasonics 'eTeltow
Amadivaysi e-Ultrasonic for I-Lab futhi Industry
I-Hielscher USA, Inc.
Ukuphatha / Ukubika
Wanaque, NJ 07465, eU.SA
ifoni: +1 (973) 532-6488 101
Ukucubungula i-oda / Indawo yokugcina impahla
Mount Holly, NJ 08060, eU.SA
ifoni: +1 (973) 532-6488 108